Imithetho Yokusebenza Yokudluliswa kwamandla nokuhluleka kwamandla kagesi we-High Voltage switchgear
I-KYN28A-12 i-voltage switchgear ephezulu "yezindlela ezinhlanu zokuvimbela" ukusebenza kokuhlangana; 1. Vimbela iphutha lephulethi yesekethe - isandla sekhefu lesifunda kufanele sisebenze noma sisebenze endaweni yokuhlola, ikhefu lesifunda lingavalwa, kusebenze okuvulekile. 2.Vimbela ukuhamba kwesifunda ...
Indawo yokutshala ugesi, njengendawo lapho ugesi ukhiqizwa khona, imvamisa kufanele ibhekane nogesi.Kwifektri yethu, imoto esefektri ihlukaniswe kakhulu ngemoto eyi-6KV kanye ne-400V motor. I-switchgear yamandla aphezulu isetshenziswa kakhulu ekusabalaliseni amandla ...
Ikhanda lesiginali sekhebula lihlanganisa ukuvimbela ukungena kwamanzi, ukulawula ingcindezi, ukuvikela nokuvikela, futhi linezinto ezinhle zikagesi nezomshini, futhi lingasetshenziswa isikhathi eside ngaphansi kwezimo ezahlukahlukene ezinzima zemvelo. Manje uyini umsebenzi we-terminal cable? Ake ngiyethule kuwe ngi ...
Uhlelo lokwakhiwa kwamadolobha ahlakaniphile kanye ne-Intanethi Yezinto lududulele izinzwa phambili. Noma ngabe kuseChina noma emhlabeni wonke, ukwakha imiphakathi ehlakaniphile sekuwumkhuba ongalungiseki. Kule ndawo ejwayelekile, izinzwa njenge "bhuloho" lamadolobha ahlakaniphile ngokungenakugwemeka ...
Amakhono amahlanu wokuklama nezinkomba zobuchwepheshe zenzwa
Inani lezinzwa liyanda emhlabeni wonke nasezikhaleni ezisizungezile, lihlinzeka umhlaba ngedatha.Lezi zinzwa ezingabizi zingamandla agqugquzela ukuthuthukiswa kwe-Intanethi Yezinto kanye nenguquko yedijithali umphakathi wethu obhekene nayo, nokho ...
Ukuhlaziywa kwephutha nezinyathelo zokuphikisa ze-switchgear
Yini i-switchgear? I-switchgear iqukethe i-switchgear eyodwa noma ngaphezulu ye-low-voltage switchgear kanye nokulawulwa okuhlobene, isilinganiso, isignali, ukuvikelwa, umthetho kanye neminye imishini, nomenzi obhekele konke ukuxhumana kwangaphakathi kukagesi nokwenziwa kwemishini, ukuhlangana okuphelele kokuhlanganiswa kwesakhiwo ...
Isifinyezo solwazi oluyisisekelo lwama-Transformers ohlobo olomile
Ama-dry-type transformers asetshenziswa kakhulu ekukhanyeni kwasendaweni, izakhiwo eziphakeme kakhulu, izikhumulo zezindiza, imishini yemishini ye-CNC nezinye izindawo. Kalula nje, ama-transformers ohlobo olomile abhekisa kuma-transformer anama-cores kanye nama-windings angacwiliswanga ekufakeni uwoyela. Izindlela zokupholisa zihlukaniswe zemvelo ...
Izinyathelo zokuphepha zokusebenzisa i-High-voltage switchgear
Ngoba i-switchgear ibukhoma, iyingozi kakhulu. Uma unganakile uma uyisebenzisa, izokwenza ukuthi umshini ungakwazi ukusebenza ngokujwayelekile, futhi uzodala ugesi, ozothinta impilo yakho. Ngakho-ke, uma usebenzisa i-high-voltage switchgear, udinga ukunaka kakhulu ...
Ungayifaka Kanjani futhi Uyisebenzise I-Dropout Fuse Cutout
I-1/6 Indlela yokusebenza Ukufakwa kwefiyuzi yokulahla kufanele ihlangabezane nalezi zidingo ezilandelayo Ngaphambi kokufakwa, hlola ukuqinisekisa igebe eliphakathi kweshubhu elincibilikayo nosekelo lokuvikela. Usayizi ofanayo uhlangabezana nezidingo zebhukwana lokufundisa ukuqinisekisa ukwanele oxhumana naye okwanele ...
Ukusebenza kwe-Dropout Fuse Cutout
Ukulungiselela ukuphepha: Lapho ukhipha i-fuse yohlobo lokudonsa, opharetha kufanele asebenzise induku yokuhlukanisa ngamazinga kagesi afanele futhi adlulise isivivinyo, afake izicathulo zokuvala, amagilavu ​​wokuvikela, ikepisi lokuvala kanye nezibuko, noma ame epulatifomu eyomile yokhuni, futhi agadiwe ukuvikela ukuphepha komuntu siqu ....
Uyini umehluko phakathi kwe-high voltage circuit breaker kanye nenkinobho yokuhlukanisa?
I-high voltage circuit breaker (noma i-high voltage switch) iyona mishini eyinhloko yokulawula amandla esiteshini, enezici zokucisha i-arc, lapho ukusebenza okujwayelekile kohlelo, kunganqamuka kudlule kulayini nakwimishini kagesi ehlukahlukene engenamthwalo nomthwalo zamanje; Lapho i-f ...
Umehluko phakathi kokushintshwa kwekhabethe, ikhabethe elifuthwayo nekhabethe eliqinile
IKhabethe lenethiwekhi yokukhala: eyaziwa nangokuthi i-HXGN-12, i-XGN15-12 yohlobo lwe-voltage switchgear. ikhabethe lenethiwekhi. 1, iringi ne ...